वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन हाम्रो खाँचो पर्दैनः उपेन्द्र याद – www.agnijwala.com
वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन हाम्रो खाँचो पर्दैनः उपेन्द्र याद
‘संविधान संशोधनको विषय अगाडि राखेर कसलाई सहयोग गर्ने टुंगो लाग्छ’सरकार गठनमा ढिला भइरहँदा संघीय समाजवादी फोरम र एमाले मिलेर सरकार बनाउने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले एमालेले फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरेको चर्चा गरेका थिए। तर, उक्त प्रयास सफल नभएपछि अन्ततः माओवादी केन्द्र बिना एमालेले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको विश्लेषण सुनाएका थिए प्रचण्डले कार्यकर्तालाई। फोरममात्र यस्तो शक्ति हो जसको सहयोगले माओवादी बिना पनि एमालेको सत्तारोहण सम्भव छ। यसै सन्दर्भमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अग्निज्वाला डटकमका समाचार दाता रामन थाकुरले गरेको संक्षिप्त वार्ताः
राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि विधेयकले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेपछि सरकार गठनको प्रकृया अगाडि बढ्छ र सरकार बन्छ। संविधान धेरै मामलामा गलत र त्रुटिपूर्ण छ। राष्ट्रिय सभालाई सरकार निर्माणसँग जोड्नु हुँदैनथ्यो, जोडिएको छ। चुनाव गराउनु पर्यो। चुनाव गराउनका लागि कानुन छैन। अध्यादेश बाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। यसलाई ढिला गर्नु त समय बर्बादमात्र हो। र थप आशंका उत्पन्न गर्नेमात्र हो।
एकल संक्रमणीय व्यवस्था संविधानमै छैन भन्ने एमालेको तर्क छ नि त?
संविधानमा त चुनाव गर्ने भन्नेमात्र छ नि त। चुनाव गराउनेमात्र भनिएको छ। कसरी गराउने भनिएको भए यो लफडा हुने नै थिएन। त्यसैकारण त सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
सरकार गठनमा संघीय समाजवादी फोरमको भूमिका के हुन्छ?
हामीले त जनताका बीचमा गएर जसले बहुमत ल्याएको छ उसैले सरकार बनाए हुन्छ भनेकै छौं नि। वामगठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ, उनीहरुले नै सरकार बनाउन्। हामीले कहाँ अवरोध गरेका छौं र? उहाँहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हाम्रो के खाँचो पर्छ र? उहाँहरुको राम्रो बहुमत छ, त्यहाँ हाम्रो कुनै आवश्यकता नै छैन नि। उहाँहरुको किचलो उहाँहरुले नै मिलाउनु होला नि।
प्रचण्डले पनि भने, एमालेले तपाईंहरुसँग सरकार गठनका लागि हात बढाएको छ रे?
प्रयास गर्नु नराम्रो कुरा हो र? प्रयास त गरिहाल्छन् नि, त्यो त स्वभाविक कुरा हो। सरकार गठनका सम्बन्धमा सबै पार्टीसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेकै छ। हामी सरकार गठनका विषयमा खुल्ला छौं, हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, सबैले छलफल गरिरहनु भएको छ।
सरकार गठन लगायतका विषयमा राजपा र तपाईंहरुको धारणा एउटै हो कि छुट्टाछुट्टै?
पाँचवटा राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् र पाँचवटाका बीचमा छलफल, बहसहरु हुन्छन्।
एमालेसँग मिलेर संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा जाने सम्भावना छ कि छैन?
त्यो कुरा एमालेमा निर्भर गर्छ। हामीलाई त सरकार बनाउनुपर्ने कुनै खाँचो छैन। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा उसको व्यवहारमा भर पर्छ।
एउटा चर्चा एमालेले तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने र सरकार बनाउने भन्ने पनि छ नि?
यी सबै उडन्ते कुराहरु हुन्। अहिले त्यस्तो केहि छैन, यी सबै बजारका कुराहरु हुन्। बजारका कुराका पछि नलागौं। यी सस्तो बजारमा पाइने कुराहरु हुन्।
अब तपाईंहरुका लागि संविधान संशोधनको विषय प्रमुख हुन्छ कि सरकार निर्माण?
संविधान संशोधन गर्ने, मधेस लगायतका विषयमा हामीले उठाएका जुन मुद्धा छन् त्यसलाई लिएर फेस गर्ने कुरा त हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन्। सरकारभन्दा ठूलो प्राथमिकता संविधान संशोधन हो। त्यसैले हामी यस विषयमा खुल्ला छौं, जसले हामीलाई सहयोग गर्छ, त्यसैलाई हामीपनि सहयोग गर्छौँ। जसले हाम्रो मुद्धा हल गर्छ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। संविधान संशोधनको विषय अगाडि राखेर कसलाई सहयोग गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्छ। कसलाई सहयोग गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषय त हामीले उठाएका मुद्धाले न नाप्ने हो। त्यो नै हाम्रो आधार हो र हामी खुल्ला छौं। हामी कसैका विरुद्धमा पनि छैनौं र कसैका पक्षमा पनि छैनौं।
आगामी दिनमा राजपासँगको गठबन्धन कस्तो हुन्छ? प्रदेश सरकार गठन लगायतका विषयमा तालमेल हुन्छ?
हामी सम्बन्ध जोडेर जाउँ भन्ने पक्षमा छौं। सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। धन्यवाद
СНГtrans movie 2014aeextr.com.uaсайтокомпания экспрессГазовая пружина ESER